अण्डाको घट्यो मूल्य, प्रतिक्रेट कति पर्छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अण्डाको घट्यो मूल्य, प्रतिक्रेट कति पर्छ ?
अण्डाको घट्यो मूल्य, प्रतिक्रेट कति पर्छ ?
फागुन ३ गते, २०७७ - १२:५३
उपभोक्ताले भने सस्तो मूल्यमा अण्डा उपभोग पाएका छैनन् । उपभोक्ताले भने रु १५ मा अण्डा खरिद गर्न बाध्य छन् । विचौलियाले बढी नाफा खाएर उपभोक्तालाई महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पोखरेलले बताउए । उनले भने, “सङ्घले समन्वय गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।”
फागुन ३ गते, २०७७ - १२:५३ मा प्रकाशित